Keyboard | Lionslayer : The Legend
Posts Tagged 'Keyboard'
Burmese Transliteration, MLC Transcription System
MLC Transcription System isatransliteration system for rendering Burmese in the Latin alphabet. It is loosely based on the Pali romanisation system, has some similarities to the ALA-LC Romanization, and was devised by the Myanmar Language Commission. This system is used in many linguistic publications regarding Burmese, and is used in all MLC publications as the primary form of transcription for Burmese.
I’ve foundafew good notes on Burmese transliteration system (MLCTS).
MLCTS transliteration can be widely seen in English Wikipedia entries, Myanmar Wiktionary definitions and Myanmar Orthography (currently using in Myanmar Wiktionary).
And Romabama (ရိုးမဗမာ) isagood keyboard layout of Burmese Romanization. MLCTS itself have some cons in transforming into keyboard layout and cannot be typed with standard QWERTY keyboard. It cannot differentiate between different consonants with same pronunciation such as ta (တ and ဋ). It doesn’t differentiate between virama (ဝိရာမ – ပါဌ်ဆင့်) and asat (အသတ်) or between the anunasika (ံ) and the -m final (မ်).
I’m currently brainstorming foranew roman keyboard layout for Burmese based on standard US keyboard. Here is the latest spreadsheet.
Tags: burmese, Input method, Keyboard, layout, MLCTS, Myanmar, roman, romanization, Transcription, Transliteration
ယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေကို ရိုက်တဲ့အခါမှာ ြမန်မာ၃ဖောင့်အတွက် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ ယူနီကုဒ် ကီးဘုတ်လက်ကွက်ဟာ မှတ်သားအရ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံး အကျုံ့ဆုံးဖြစ်တာကို သတိထားမိပါတယ်။ မြန်မာစာကို သင်ပုန်းကြီးအတိုင်း ရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဒီလက်ကွက်နဲ့ရိုက်ရင် စာရိုက်တဲ့အမြန်နှုန်း သိသိသာသာ တက်လာတာ သတိထားမိပါတယ်။ မလိုတော့တဲ့ ကီးအပိုတွေ ဖယ်ပြီး ကျုံ့အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် အရင့်အရင် လက်နှိပ်စက်၊ ဝင်း၊ ဇော်ဂျီလက်ကွက်တွေနဲ့ ကွဲသွားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဓိက ဝလုံး ယပက်လက် ဂငယ် နေရာတွေ ပြောင်းသွားတာပါ။ မြန်မာစာ စရိုက်တဲ့လူတွေအတွက် ဘယ်လက်ကွက်ထက်မဆို လွယ်ပါတယ်။ တခြားကီးဘုတ်က ပြောင်းတဲ့သူတွေအတွက် နည်းနည်းသတိထားပြီး တစ်ပတ်လောက် ကျင့်ယူလိုက်ရင် ကျွမ်းကျင်သွားမှာပါ။
အခုဒီမှာပြထားတဲ့ လက်ကွက်ပုံကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝီကီအရေးဆုံးလူဖြစ်တဲ့ ကိုမြတ်သွင်က မှတ်သားရလွယ်ကူအောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြန်ဆွဲပေးထားပါတယ်။ မြန်မာ၃ လက်ကွက်ကို အသုံးပြုတဲ့ စာရိုက်သွင်းနည်း ဆော့ဝဲတွေကတော့ –
၁။ မြန်မာ၃ နဲ့အတူပါလာတဲ့ ကီးမန်းကီးဘုတ်
၂။ ဝင်းဒိုးနဲ့ OSX နှစ်မျိုးလုံးမှာရတဲ့ ကီးမက်ဂျစ်
၃။ ဝိဇ္ဇာစာရိုက်စနစ် တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Myanmar3 Unicode Keyboard Layout
ဒီပုံကို ဘယ်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
Tags: Keyboard, layout, Myanmar, Unicode
Typing Myanmarsar In Mobile
Lately, I used my iPhone for viewing web contents frequently. So I thought it should be nice to be able type Burmese in iPhone. Then someone postedaZawgyi Keyboard app for iPhone/iPad in MyanmarItPro. One of my respected friend bought it with great expectation (like addon keyboard) and felt disappointed. Well it’sapress-button-copy-text app rather thanareal keyboard. And it doesn’t support Unicode standard.
If that’s the solution for now, I was thinking like “why should I pay 1$ to copy and paste when I can type inaweb app”. Because I remembered there wasaweb version of Burglish system by Ko Soemin.
#It gotaminor bug in typing “ရ” with “၇” output.
##Updated on Mar 08 2011
TTKZ has gone further with his keymagic project. Now it’s available via web. I frame it with jkeymagic.tk domain name. It’s now possible to to type Unicode text with various keyboards on browsers.
Tags: iphone, Keyboard, mobile, Myanmar, online, Unicode, web, Zawgyi
NHM Writer For Unicode
Below texts are written in Unicode encoding. If you can’t see it properly, please go to the page “Installing Myanmar Unicode font“.
ဒီစာကို ဖတ်လို့ရနေပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ ယူနီကုတ်ဖောင့် ရှိနေပါပြီ။ ဖောင့်ကို သေချာမြင်ရပြီးတဲ့နောက် ယူနီကုတ်စနစ်ကို စ ရိုက်သုံးကြည့်ကြပါစို့။
ဇော်ဂျီစာရိုက်စနစ်နဲ့ အကျွမ်းဝင်နေသူတွေအဖို့ လက်ကွက်မတူဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ယူနီကုတ်ကီးဘုတ်ဆော့ဝဲတွေကို ရုတ်တရက်သုံးဖို့ လက်တွန့်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါမျိုးက လက်ကွက်ရုတ်တရက်ပြောင်းသုံးရင် ဖြစ်တတ်တာ အမှန်ပါပဲ။ စာလုံးတစ်လုံးနှစ်လုံးလောက်လက်ကွက်မှာ ပြောင်းသွားဟာ စာရိုက်သူရဲ့ အမြန်နှုန်းကို သိသိသာသာ နှေးကွေးသွားစေတတ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ IT ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုရာဗီက စည်းမျဉ်းပေါင်းတစ်သိန်းကျော် ပါဝင်တဲ့ Keyboard File ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကီးဘုတ်ဖိုင်ကို အိန္ဒိယက New Horizon Media ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီက အခမဲ့ ဖြန့်ဝေတဲ့ NHM Writer ကီးဘုတ်ဆော့ဝဲနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုရပါတယ်။ အဲဒီကီးဘုတ်ဆော့ဝဲကို အင်စတောလုပ်စရာဘလိုဘဲ အလွယ်စမ်းသပ်လို့ရအောင် အိတ်ဆောင်ဗားရှင်းလုပ်ထားတာ ရှိပါတယ်။
၁။ NHM.zip ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
၂။ အဲဒီဖိုင်ကို Double Click နှစ်ချက်နှိပ်ဖွင့်ပြီး အထဲက Folder ကို ကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာပေါ်ကို Drag ဆွဲချပါ။ (Unzip လုပ်ပါ။)
၃။ NhmWriter.exe ကို ဖွင့်ပါ။ Taskbar ပေါ်မှာ ခေါင်းလောင်ပုံ အိုင်ကွန်လေး ပေါ်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၄။ စာစမ်းရိုက်ကြည့်ဖို့ Notepad ကို ဖွင့်ပါ။ Format>Font ထဲမှာ Myanmar3 ကို ပြောင်းပါ။
၅။ Alt+1 ကို နှိပ်ပါ။ ခေါင်းလောင်းပုံလေး ဝါသွားရင် မြန်မာလက်ကွက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ Alt+1 ပြန်နှိပ်ရင် အင်္ဂလိပ်လက်ကွက် ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တစ်ချောင်းတင်လုံးကြီးတင်၊ အသတ်အောက်ကမြစ်စတဲ့ စာလုံးစိပုံအမှားတွေကို အလိုလို ပြင်ပေးသွားပါတယ်။
၂။ ဥသတ်၊ သရရစ်၊ သဝေထိုးသရရစ်ရေးချရှေ့ထိုး၊ စလုံးယပင့် စတဲ့ မြန်မာစာမှာ မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဉလေးသတ်၊ အက္ခရာဩ၊ အက္ခရာဪ၊ ဈမျဉ်းဆွဲ စတာတွေကို အလိုလို ပြောင်းပေးပါတယ်။
၃။ လေးထောင့်ကွင်းအပိတ် “]” ကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတစ်လုံး ရိုက်ချင်ရင် သုံးပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာစာတွေရိုက်နေရင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတစ်လုံးတည်းဖြစ်တဲ့ “A” ကို ရိုက်ချင်ရင် “]” ကို အရင်ရိုက်ပါ၊ ပြီးတော့ “A” က ိုရိုက်ပါ။
##သတိပြုရမှာကတော့ NHM သုံးနေတုန်းမှာ Ctrl+Shift စတဲ့ ဝင်းဒိုးထဲမှာ အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ ကီဘုတ်လက်ကွက်တွေအတွက် Shortcut ကို သုံးမရပါဘူး။